Ao Anatin’ny Toeran-Tsarotra ny Twitter Ao Rosia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Febroary 2017 5:36 GMT
Vorona Twitter nafangaro tamin'ny sainam-pirenena Rosiana. Sary namboarin'i Isaac Webb.
Tamin'ny 9 Febroary, nandefa pikantsary avy amin'ny mailaka tsy mahazatra voarainy avy amin'ny Twitter ilay mpisera Twitter “The OSINT” izay manazava aminy fa tsy ho hita ao Rosia intsony ny sasany amin'ireo siokany noho ny fangatahana hanakanana azy ireo avy amin'ny Roskomnadzor, sampan-draharaha manaramaso ny media Rosiana sy tompon'andraikitra amin'ny fanivanana fitaovana hita fa tsy ara-dalàna.
Tamin'ny mailaka, nanazava ny Twitter fa nanamarina ny fangatahan'ny Roskomnadzor ny fepetra napetraky ny Biraon'ny Fampanoavana tamin'ny taona 2015, mampifanaraka sy manitatra ny lalàna 2006 momba ny fandaminam-baovao. Milaza ny famerana loharanom-baovao ahitana “antso fikomiam-bahoaka, hetsika mitrifana na fandraisana anjara amin'ny hetsi-bahoaka ny fepetran'ny Fampanoavana tamin'ny taona 2015, izay nanitsy ilay antsoina hoe “Lalàna Lugovoy,”. Nampisaina hanivanana ireo sampam-pampahalalam-baovao maromaro ny fepetra, anisan'izany ny Twitter, ny tolotra mpampiantrano Github, ary ny famoahan-gazety Okraniana isan-karazany.
Nampiasa tohan-kevitra avy amin'ny lalàna tahaka izany ihany koa ny Roskomnadzor mba handidiana ireo mpamatsy tolotra aterineto Rosiana hametra ny fidirana amin'ny bilaogy tantanin'ireo olo-malaza manana ambaidainy ao amin'ny mpanohitra, tahaka an'i Alexei Navalny sy Gary Kasparov.
Araka ny filazan'ny Twitter momba ny Lalàna, tsy ho hita ao Rosia intsony ny sasany amin'ireo siokako noho ny fitakian'ny fanjakana
Ny OSINT— mpandray anjara tsy mitonona anarana ao amin'ny sehatra fampitam-baovaon'olon-tsotra—no lasibatry ny Roskomnadzor izay tsy mahagaga intsony, noho ny hatezerana nateraky ny Bellingcat tamin'ny Kremlin sy ny media Rosiana tamin'ny tatitr'izy ireo momba ny kolikoly ao Rosia, ny adin'i Moskoa ao Okraina atsinanana, ary ny fianjeran'ny sidina MH-17. Heverina fa ny tsikera matetika ataon'ny OSINT amin'ny politika Rosiana sy ny fampahalalam-baovao fehezin'ny fanjakana no nahatonga ity mpiserasera ity hiharan'izao famerana votoaty izao.
Na dia eo aza ny zava-misy fa nitaraina momba ny “votoaty mahery fihetsika” izy ireo, tsy isalasalana fa te hanampim-bava ahy izy ireo mba tsy hitsikerako an’ ireo mpiaro an'i Putin
Saingy tsy ny OSINT ihany no mpiserasera voasakana sioka ao Rosia. Mandefa fangatahana an'arivony ho an'ny Twitter ny fanjakana Rosiana isan-taona mba hanaisotra votoaty, azo inoana fa amin'ny fampiasana ny dingana Fangatahana Fanesorana Votoaty ao amin'ny Twitter natao ho an'ny sampan-draharaham-panjakana. Mitaky amin'ny sampan-draharaham-panjakana izany dingana izany mba hampiseho fa manitsakitsaka ny lalàna ao an-toerana ilay votoaty ao amin'ny tambajotra. Raha eken'ny orinasa ny fangatahana, dia hosivanina izany votoaty izany na “sakanana ara-jeografika” ao anatin'ny firenena.
Araka ny tatitra ara-pangaraharana vao haingana indrindra avy amin'ny Twitter, tamin'ny Janoary hatramin'ny Jona 2016, nanao fangatahana fanesorana votoaty miisa 1599 ny manam-pahefana Rosiana ary nilaza fa kaonty 1698 no nanao fandikan-dalàna. Nametra kaonty 10 sy nanakana ara-jeografika sioka 182 tao anatin'ny faritany Rosiana ny Twitter nandritra izany fotoana izany, mametraka an'i Rosia ho anatin’ ireo firenena enina voalohany izay nankatoavin'ny Twitter ny fangatahana fanesorana votoaty.
Tsy zava-baovao tanteraka izany: nahitana fiakarana goavana ny isan'ny fangatahan'ny Rosiana hanaisotra votoaty tamin'ny taona 2015. Na izany aza, kely ny sivana Rosiana raha oharina amin'ny mpitari-dalana tsy azo iadian-kevitra, Torkia, izay nanakanan'ny Twitter ara-jeografika sioka maherin'ny 1500 sy kaonty miisa 222 tao anatin'ny tapany voalohany amin'ny taona 2016 monja.
Samy manana Fifanekena Fifanampiana Ara-pitsarana miaraka amin'ny Etazonia ny firenena roa tonta, izay afaka manery ireo orinasa tahaka ny Twitter mba hanaiky ny fitakian'ny governemanta avy any ivelany raha toa ka nalefa tamin'ny alalan'ny fantsona sahaza sy niaraka tamin'ny didy navoakan'ny fitsarana izany. Saingy i Torkia ihany no toa nampiasa ity dingana ity tamin'ny taona 2016, izay anton'ny tarehimarika ho ambony dia ambony ao aminy.
Tamin'ny fiandohan’ ity taona ity, kaonty maromaro malaza mpaka tahaka momba an'i Rosia no nesorin'ny Twitter vonjimaika. Nilaza ny Twitter tany am-boalohany fa noho ny fanitsakitsahana ny fitsipika mifehy ny kaonty maka tahaka no anton'izany, saingy naverina indray ny kaonty taty aoriana rehefa nahita, hono, fa mazava tsara ny tanjon'ny fakan-tahaka. Na dia niteraka resabe avy amin'ny fiarahamonina Twitter sasany aza ny fandraràna vonjimaika efa nataon'izy ireo, natao noho ny ahiahy amin'ny fandikàna ny fepetra fampiasàna ny tolotra Twitter ny fanapahan-kevitra hamerenana indray ireo kaonty ireo. Angamba vokatry ny fanamarihana avy amin'ny mpiserasera hafa ny fihetsiky ny Twitter tamin'ireo kaonty ireo, fa tsy noho ny fitakian'ny fanjakana mivantana.
Saingy mora ny manontany raha nandefitra tamin'ny fitakian'ny fanjakana Rosiana ny Twitter izay tafiditra amin'ny ezaka hanohy hiasa ao amin'ny faritanin'i Rosia. Tamin'ny lohataona 2015, nandefa fandrahonana mazava tany amin'ny Facebook, Google sy Twitter ny Roskomnadzor, milaza azy ireo mba hanaja ny fitakian’ ny sampan-draharaha amin'ny fanesorana votoaty mikendry ireo “votoaty mahery fihetsika, raha tsy izany voasazy mandoa onitra na voaràra tanteraka. Fanampin'izany, niezaka nanery ireo orinasa vahiny momba ny aterineto mba hitazona ny tahirin’ ireo mpiserasera Rosiana ao amin'ny tany Rosiana i Rosia – fitakiana izay vitan'ny Twitter sy ny orinasa hafa ny mandika azy hatramin'izao. Tamin'ny Novambra 2016, na izany aza, nobahanana tanteraka tao Rosia ny tranonkala tambajotra ara-tsosialy sy arak'asa LinkedIn noho izy voalaza fa nandika izany lalàna izany. Noraisin'ny mpanara-baovao ho fepetra hanerena ny orinasa vahiny mba hanomboka hanangona tahiry amin'ny lohamilina ao anatin'i Rosia izany.
Vokatr'izany, toa ao anatin'ny toeran-tsarotra ny sehatra tahaka ny Twitter, mahita marimaritra iraisana ahafahany mbola miasa, fara faharatsiny, ny filazan'izy ireo hanohana ny fahalalahana maneho hevitra no sady misoroka ny fandroahana avy amin'i Rosia. Milaza izany fomba izany fa aleony manao sivana fantenina, toy izay midi-kizo amin'ny fandroahana tanteraka avy amin'ny fanjakana tahaka an'i Torkia sy Rosia.
Hatramin'ny nanombohan'ny Hetsika Maitso tao Iran tamin'ny taona 2009, heverina tanteraka ho mpanamora ny fivezivezen'ny vaovao am-pahalalahana manoloana ny fanjakana mpangeja ny Twitter sy ny sehatra media sosialy hafa. Ny firenena tahaka an'i Rosia sy Torkia kosa, na izany aza, dia namaly ny fanavaozana ara-teknolojia amin'ny fanavaozana ny lalàna, tahaka ny lalàna momba ny famantarana ny misy ny lohamilina, izay nahatonga ireo orinasa tahaka ny Twitter ho tafiditra amin'ny toeran-tsarotra manoloana ny marika ahafantarana azy ireo ho sehatry ny fahalalaham-pitenenana.